Usbuuc dhammaadka sawirada 13 - Geofumadas
Toddobaadkii hore ee sawirada 13
Sebtember, 2011 Leisure / waxyi, safarka
Ma jirto wax nasasho ah oo ku raaxaysanaya geofumaditos halkaas. Ka dib markii uu biloowday dagaalkii karraaniga methane methane, kadib markii imtixaanno aan u baxnay si aan u dabaaldego booqashada nin ka dhacay Houston. Soo koobitaan waxaan ka tagaa sawiro.
Ka dib faallo kama dambays ah, waxay ku guuleysteen kaalinta koowaad ee heerka shanta qaybood ee Koorsada Koowaad, ka dibna booska saddexaad ee heerka dugsiga oo idil, iyo dhexgalinta booska koowaad ee category of Chemistry. Kuwani waxay u dhalatay inay noqdaan horyaalka.
In hudheel soo gudub ah waxaan ka helnaa daruuro kaneecada oo ku filan si ay u cunaan lo'da. Ka hor inta aan xasaasiyadda gabadheyda, oo hore u qaniinaysay iyada oo wejiga hore, waxaan naftayda xusuusiyay iPad-ka (Q Kaneecada) kaas oo ku soo baxa ultrasound buuqa boodhka ragga ... ku filan, waxaan u seexannahay farxad been ah oo u muuqata marka aan xuso.
Jimicsiga qaarkood, si aad u diiriso makiinadaha. Hooyadey oo leh caafimaad khatar ah ilaa sanadaheeda 70.
Tani waa aragtida Lake Yojoa, oo ka soo jeeda El Aguaje, oo ah meel ka badan laba sano ka hor iyadoo la adeegsanayo Google Earth iyo waxyaabo oluna montuno waxaan helnay wiil kuwaas oo horayba u gaadhay sanadaha 15.
Tani waxay ku taallaa xadiiqadda Las Vegas, oo ku xigta carabta macdanta ah oo calaamad u ah waxyaallaheeda. Halkaan waxaan ku iibineynaa maaliyada Barca qiimo fiican, bartamaha wadada.
Kiimirada Angry waa wax aan caqli gal ahayn, iPad-ga wuxuu ku adkeeyay dhammaan noocyada jilicsanaanta. Kadibna waxaan u tagnay qaboojiyaha mareemaha in maalmahaas ay tahay raaxo leh oo leh nus-katagid milix yar ka dib kuleylka August. Mid waliba wuxuu keenay dhagxaan xusuus ah.
Inta soo hartey maahan sharaxaad badan. Marka laga reebo sanka gubtay, sababtoo ah gabadha indhahayga indhahaygu ma socoto, waxaynu illoobi karnaa wax kasta, oo ay ku jiraan muusigga.
Hadda si aad ah u shaqeeyaan inta ay socdaan wadooyinka wadaniga ah ...
Post Previous«Previous GIS Kit, ugu danbeyn waxtar u ah iPadka
Post Next MobileMapper iyo Gelitaanka IsbaanishNext »